‘Mampalahelo Ny Mahita fa Polisy no Toriana, ny Niharam-pahavoazana Indray no Tsaraina’ · Global Voices teny Malagasy
A Journey for Justice in the Americas, Part 2: In Kingston, a Brazilian Woman Tells Her Story
Voadika ny 14 Avrily 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Português, Ελληνικά, English
Nihaona tamin'ireo namany roa vao haingana- Shackelia Jackson avy any Jamaika sy Katrina Johnson avy any Etazonia – Kingston, renivohitr'i Jamaika i Ana Paula Oliveira, Breziliana mpikatroka ny zon'olombelona. Anisan'ny tao anatin'ny hetsiky ny Amnesty International, A Journey for Justice in the Americas (Andro ho an'ny Rariny ao Amerika), izay mifantoka amin'ny tolona ataon'ny fianakaviana manana hava-tiana novonoin'ny polisy ireo vehivavy ireo.
Ankoatra izay, amin'ny faritra Amerika Latina/Karaiba manana ny taham-pamonoana ambony indrindra manerantany, mitady hanohana ny fomba famaizana ataon'ny polisy ny hevitry ny daholobe, araka ny fanadihadiana toy ny Tatitra LAPOP an'ny Oniversite Vanderbilt/USAID. Mila fanohanana bebe kokoa avy amin'ireo rafi-pitsarana ao amin'ny fireneny tsirairay avy, ary avy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny koa ireo vehivavy toa an'i Ana Paula, Shackelia ary Katrina ireo.
Mandritra izany, mbola mitombo ny famonoana ataon'ny polisy ao Jamaika. Ny 1 aprily 2018, Jamaikana 31 no maty novonoin'ny polisy, ka telo maty voatifitry ny polisy tao amin'ny paroasin'i Md James (izay Fanjakana latsaka an-katerena amin'izao fotoana izao) tamin'ny fety Zoma Masina.
Tany Brezila tamin'ny taona 2016, polisy manamboninahitra – anisan'izany ireo manamboninahitra tsy miasa – no nahafaty olona 4.224, fitomboana 25% ao anatin'ny herintaona monja. Niteraka fihetsiketsehana mieli-patrana sy fitakiana ho an'ny rariny (anisan'izany ireo olo-malaza Afrikana-Amerikana) ny fitifirana vao haingana mpikatroka ambony.
Ary any Etazonia, namintina tamin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny Kaomisera Jamaikana Margarette May Macaulay, Mpitatitra Manokan'i Etazonia ny famotoran'ny Filan-kevitra Iraisan'ny Samy Amerikana momba ny Zon'olombelona (IACHR) tamin'ny Desambra 2017, izay “nanambara fa olana ao amin'ny ny tanindrazany ao Jamaika ihany koa ny herisetran'ny polisy. Nandrisika an'i Etazonia izy mba hanangana rafitra fanaraha-maso mahaleotena amin'ny heloka bevava ataon'ny polisy, ivelan'ny rafi-pitsarana ara-dalàna, araka ny natsangan'izy ireo manokana vao haingana tao Jamaika. Nandrisika an'i Etazonia ihany koa izy mba hanatsara ny fampiofanana, hanome fanarenana feno ho an'ireo niharam-pahavoazana, ary koa hijery ny olan'ny fahazoana mora mividy basy.”